Da Atɛntrenee ne Adetrenee Adi, Wo Ne Onyankopɔn Nnantew | Bɛn
‘Atɛntrenee Mu’ a Yɛne Onyankopɔn Bɛnantew
1-3. (a) Dɛn nti na yɛde Yehowa aseda ka? (b) Dɛn na yɛn Gyefo a ɔwɔ dɔ no hwehwɛ fi yɛn hɔ?
FA NO sɛ woaka po so hyɛn bi a ɛremem mu. Bere a wunya adwene sɛ anidaso biara nni hɔ pɛ no, ogyefo ba beyi wo kɔ baabi a ahobammɔ wɔ. Hwɛ abotɔyam a wubenya bere a ogyefo no de wo fi asiane no mu rekɔ na ɔka sɛ: “Afei de woafi asiane no mu” no! So worente nka sɛ wode saa onipa no ka? Wo nkwa gyina ne so ankasa.
2 Ɔkwan bi so no, eyi kyerɛkyerɛ nea Yehowa ayɛ ama yɛn no mu. Akyinnye biara nni ho sɛ yɛde no aseda ka. Anyɛ yiye koraa no, ɔde agyede ama, na wama ayɛ yiye sɛ wobegye yɛn afi bɔne ne owu nnommumfa mu. Yɛte nka sɛ yɛwɔ ahobammɔ, a yenim sɛ bere tenten a yɛkyerɛ saa afɔre a ɛsom bo no mu gyidi no, wɔde yɛn bɔne afiri yɛn, na yɛn daakye a enni awiei tim hɔ pintinn. (1 Yohane 1:7; 4:9) Sɛnea yehui wɔ Ti 14 no, agyede no ne Yehowa dɔ ne atɛntrenee a ɛsen biara a wada no adi. Ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yɛyɛ yɛn ade wɔ ho?
3 Ɛfata sɛ yesusuw nea yɛn Gyefo a ɔwɔ dɔ no ankasa hwehwɛ fi yɛn hɔ ho. Yehowa nam ne diyifo Mika so kae sɛ: “Wɔaka nea eye akyerɛ wo, onipa, ne nea [Yehowa, NW] hwehwɛ wo hɔ: ɛnyɛ biribiara sɛ [atɛntrenee, NW] ne adɔepɛ ne ahobrɛase a wode ne wo Nyankopɔn nantew.” (Mika 6:8) Hyɛ no nsow sɛ nneɛma a Yehowa hwehwɛ fi yɛn hɔ no mu biako ne sɛ ‘yɛbɛda atɛntrenee adi.’ Yɛbɛyɛ dɛn atumi ayɛ saa?
“Nokware Trenee” Akyi a Yebedi
4. Yɛyɛ dɛn hu sɛ Yehowa hwɛ kwan sɛ yɛde ne trenee gyinapɛn ahorow bɛbɔ yɛn bra?
4 Yehowa pɛ sɛ yɛde ne gyinapɛn ahorow a ɛfa papa ne bɔne ho bɔ yɛn bra. Esiane sɛ ne gyinapɛn ahorow yɛ nea ɛteɛ nti, sɛ yɛde bɔ yɛn bra a na yɛredi atɛntrenee ne trenee akyi. Yesaia 1:17 ka sɛ: “Munsua papayɛ, monhwehwɛ atɛntrenee.” Onyankopɔn Asɛm tu yɛn fo sɛ ‘yɛnhwehwɛ trenee.’ (Sefania 2:3) Ɛhyɛ yɛn nkuran nso sɛ ‘yɛnhyɛ nipasu foforo a wɔbɔɔ no Onyankopɔn so, nokware trenee mu.’ (Efesofo 4:24) Nokware trenee—nokware atɛntrenee—kwati basabasayɛ, afideyɛ, ne ɔbrasɛe, efisɛ saa nneɛma yi ho ntew.—Dwom 11:5; Efesofo 5:3-5.
5, 6. (a) Dɛn nti na ɛnyɛ den sɛ yebedi Yehowa gyinapɛn ahorow so? (b) Ɔkwan bɛn so na Bible da no adi sɛ trenee akyi a yebedi no yɛ adeyɛ a ɛkɔ so ara?
5 So ɛyɛ den sɛ yebedi Yehowa trenee gyinapɛn ahorow akyi? Dabi. Yehowa ahwehwɛde so di nyɛ den mma koma a ɛbɛn no. Esiane sɛ yɛdɔ yɛn Nyankopɔn ne sɛnea ɔte biara nti, yɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra wɔ ɔkwan a ɛsɔ n’ani so. (1 Yohane 5:3) Kae sɛ Yehowa ‘pɛ asɛntrenee.’ (Dwom 11:7) Sɛ yebetumi asuasua Onyankopɔn atɛntrenee, anaa trenee a, ɛsɛ sɛ yɛn ani gye nea Yehowa ani gye ho ho na yekyi nea okyi.—Dwom 97:10.
6 Ɛnyɛ mmerɛw sɛ nnipa a yɛnyɛ pɛ bedi trenee akyi. Ɛsɛ sɛ yeyi nipasu dedaw ne ne nneyɛe bɔne no gu, na yɛhyɛ nipasu foforo. Bible ka sɛ wɔnam nokware nimdeɛ so na ‘ɛyɛ’ nipasu foforo no “foforo.” (Kolosefo 3:9, 10) Nsɛm “wɔyɛ no foforo” no kyerɛ sɛ nipasu foforo a wɔhyɛ no yɛ adeyɛ a ɛkɔ so ara, nea ɛhwehwɛ sɛ wɔde nsi yɛ. Ɛmfa ho mmɔden a yɛbɔ sɛ yɛbɛyɛ nea ɛteɛ no, mmere bi wɔ hɔ a bɔne a wɔde woo yɛn no ma yɛfom wɔ nsusuwii, asɛm, anaa nneyɛe mu.—Romafo 7:14-20; Yakobo 3:2.
7. Ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yebu huammɔ a yedi wɔ mmɔden a yɛbɔ sɛ yebedi trenee akyi no mu?
7 Ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yebu huammɔdi a yehyia wɔ mmɔden a yɛbɔ sɛ yebedi trenee akyi no mu? Nokwarem no, ɛnsɛ sɛ yebu aniberesɛm a bɔne yɛ no adewa. Bere koro no ara no, ɛnsɛ sɛ yɛpa abaw, a yɛte nka sɛ yɛn sintɔ ahorow no ma yɛyɛ nnipa a yɛmfata sɛ yɛsom Yehowa. Yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ ɔdomfo no ayɛ nsiesiei a ɔnam so ma wɔn a wonu wɔn ho komam no nya n’anim dom bio. Susuw ɔsomafo Yohane nsɛm a awerɛkyekye wom yi ho hwɛ: “Merekyerɛw eyinom mabrɛ mo, na moanyɛ bɔne.” Afei ɔde kaa ho pefee sɛ: “Na sɛ obi yɛ bɔne [esiane sintɔ a yenya fii awo mu nti] a, yɛwɔ okyigyinafo bi, agya no nkyɛn, ɔne ɔtreneeni Yesu Kristo.” (1 Yohane 2:1) Yiw, Yehowa de Yesu agyede afɔre no ama na ama yɛatumi asom no wɔ ɔkwan a ɛsɔ ani so ɛmfa ho sɛ yɛyɛ abɔnefo. So ɛno nka yɛn mma yennya ɔpɛ sɛ yɛbɛyɛ nea yebetumi biara sɛ yɛbɛsɔ Yehowa ani?
Asɛmpa no ne Onyankopɔn Atɛntrenee
8, 9. Ɔkwan bɛn so na asɛmpa no a yɛka no da Yehowa atɛntrenee adi?
8 Yebetumi ada atɛntrenee adi—nokwarem no, yebetumi asuasua Onyankopɔn atɛntrenee—denam Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no a yɛbɛka akyerɛ afoforo no so. Abusuabɔ bɛn na ɛwɔ Yehowa atɛntrenee ne asɛmpa no ntam?
9 Yehowa remfa nhyehyɛe bɔne yi mma awiei bere a yennii kan mmɔɔ ho kɔkɔ. Yesu kae wɔ nkɔmhyɛ a ɛfa nea ɛbɛkɔ so wɔ awiei bere mu ho mu no sɛ: “Etwa sɛ wɔka asɛmpa no kyerɛ amanaman nyinaa kan.” (Marko 13:10; Mateo 24:3) Asɛmfua “kan” a ɔde dii dwuma no kyerɛ sɛ nsɛm foforo bedi wiase nyinaa asɛnka adwuma no akyi aba. Ahohiahia kɛse a wɔkaa ho asɛm siei, a ɛbɛkyerɛ ɔsɛe ama abɔnefo, na abɔ kwan ama trenee wiase foforo no ka saa nsɛm no ho. (Mateo 24:14, 21, 22) Akyinnye biara nni ho sɛ, obiara nni hɔ a obetumi abɔ Yehowa sobo sɛ ɔne abɔnefo anni no yiye ma afata. Ɔnam kɔkɔ a wama wɔrebɔ no so rema saafo no anya hokwan pii de asesa wɔn akwan, na wɔnam so akwati ɔsɛe.—Yona 3:1-10.
Sɛ yɛka asɛmpa no kyerɛ afoforo a yɛnyɛ nyiyim a, na yɛreda Onyankopɔn atɛntrenee adi
10, 11. Ɔkwan bɛn so na kyɛfa a yenya wɔ asɛmpa no ka mu no da Onyankopɔn atɛntrenee adi?
10 Ɔkwan bɛn so na asɛmpa no a yɛka no da Onyankopɔn atɛntrenee adi? Nea edi kan koraa no, ɛteɛ sɛ yɛyɛ nea yebetumi biara sɛ yɛbɛboa afoforo ma wɔanya nkwagye. Susuw mfatoho a ɛfa gye a wogye wo fi po so hyɛn a ɛremem mu ho no ho bio. Bere a wote ahyɛmma a wɔde gye nkwa mu dwoodwoo no, akyinnye biara nni ho sɛ wobɛpɛ sɛ woboa afoforo a wɔda so wɔ nsu no mu no. Saa ara na yɛwɔ asɛyɛde wɔ wɔn a wɔda so repere wiase bɔne yi “nsu” mu no ho. Ɛwom, bebree po yɛn asɛm no. Nanso, bere tenten a Yehowa kɔ so da boasetɔ adi kyerɛ wɔn no, yɛwɔ asɛyɛde sɛ yɛma wonya hokwan “ba adwensakra mu,” na wɔnam so fata ma nkwagye.—2 Petro 3:9.
11 Sɛ yɛka asɛmpa no kyerɛ wɔn a yehyia wɔn nyinaa a, yɛda atɛntrenee adi wɔ ɔkwan foforo a ɛho hia so: Yɛnyɛ nyiyim. Kae sɛ “Onyankopɔn nhwɛ onipa anim, na mmom ɔman biara mu, nea osuro no na ɔyɛ ade trenee no, ɔpɛ no agye no.” (Asomafo no Nnwuma 10:34, 35) Sɛ yebesuasua N’atɛntrenee a, ɛnsɛ sɛ yɛhwɛ afoforo anim bu wɔn ntɛn. Mmom no, ɛsɛ sɛ yɛka asɛmpa no kyerɛ afoforo a abusua a wofi mu, dibea a wɔwɔ, anaa wɔn sikasɛm tebea mfa ho. Yɛnam saayɛ so ma wɔn a wobetie nyinaa nya hokwan te asɛmpa no na wɔyɛ ho biribi.—Romafo 10:11-13.
Sɛnea Yɛne Afoforo Di
12, 13. (a) Dɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛpɛ ntɛm bu afoforo atɛn? (b) Yesu afotu a ese “mummmu ntɛn” ne “mummmu fɔ” no kyerɛ dɛn? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.)
12 Yɛnam sɛnea yɛne afoforo di sɛnea Yehowa ne yɛn di no so nso tumi da atɛntrenee adi. Ɛnyɛ den koraa sɛ yebebu afoforo atɛn, aka wɔn mfomso ahorow ho asɛm, na yɛakasa atia adwene a wokura anya ho adwemmɔne. Nanso, yɛn mu hena na ɔbɛpɛ sɛ Yehowa feefee ne nsusuwii ne ne sintɔ ahorow mu atirimɔden so? Ɛnyɛ saa na Yehowa ne yɛn di. Odwontofo no kae sɛ: “Yah, sɛ wudi amumɔyɛde akyi a, [Yehowa, NW], hena na anka obegyina?” (Dwom 130:3) So ɛnyɛ yɛn anigye sɛ yɛn Nyankopɔn a obu atɛntrenee na ɔyɛ mmɔborohunufo no mfa n’adwene nsi yɛn mfomso ahorow so? (Dwom 103:8-10) Ɛnde, ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yɛne afoforo di?
13 Sɛ yɛn ani sɔ mmɔborohunu a ɛwɔ Onyankopɔn atɛntrenee mu no a, yɛrempɛ ntɛm mmu afoforo atɛn wɔ nneɛma a ɛmfa yɛn ho ankasa anaasɛ ɛho nhia pii mu. Wɔ Yesu Bepɔw so Asɛnka no mu no, ɔbɔɔ kɔkɔ sɛ: “Mummmu ntɛn, na wɔammu mo ntɛn.” (Mateo 7:1) Sɛnea Luka kyerɛwtohɔ no kyerɛ no, Yesu de kaa ho sɛ: “Mummmu fɔ, na wɔammu mo fɔ.” * (Luka 6:37) Yesu daa no adi sɛ onim sɛ nnipa a yɛnyɛ pɛ no taa bu ntɛn. Na ɛsɛ sɛ n’atiefo no mu biara a ɔtaa bu afoforo ntɛn denneennen no gyae.
14. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ ‘yegyae ntɛn a yegu so rebu afoforo no’?
14 Dɛn nti na ɛsɛ sɛ ‘yegyae ntɛn a yebu’ afoforo? Ade biako ne sɛ, yɛn tumi sua. Osuani Yakobo kae yɛn sɛ: “Obiako ne mmarahyɛfo ne temmufo”—ɔne Yehowa. Enti Yakobo bisae pefee sɛ: “Ɛhena ne wo a wubu obi atɛn?” (Yakobo 4:12; Romafo 14:1-4) Afei nso, ɛnyɛ den koraa sɛ bɔne mu a wɔwoo yɛn no betumi ama yɛabu ntɛnkyea. Nneyɛe ne nsusuwii pii—a nea ɛka ho ne menasepɔw, abufufa, nitan, ne ɔtreneeni a obi bu ne ho—betumi ama yɛanya adwene a ɛnteɛ wɔ sɛnea yehu yɛn yɔnko nnipa no ho. Yɛwɔ sintɔ afoforo, na ɛsɛ sɛ eyinom ho a yesusuw no mma yɛnyɛ ntɛm nhwehwɛ afoforo ho mfomso. Yentumi nhu nnipa komam; na saa ara na yentumi nhu afoforo nyinaa nsɛm tebea mu. Ɛnde, hena ne yɛn a yebenya adwemmɔne ama mfɛfo gyidifo anaasɛ yɛbɛkasa atia mmɔden a wɔrebɔ wɔ Onyankopɔn som adwuma no mu no? Hwɛ sɛnea eye koraa sɛ yebesuasua Yehowa denam yɛn nuanom mmarima ne mmea ho nneɛma pa a yɛbɛhwehwɛ mmom sen sɛ yɛde yɛn adwene besi wɔn mfomso ahorow so!
15. Nsɛm ne nneyɛe bɛn na enni afã biara wɔ Onyankopɔn asomfo mu, na dɛn ntia?
15 Na yɛn abusuafo nso ɛ? Awerɛhosɛm ne sɛ, wɔ nnɛ wiase no, ntɛn a enye koraa a wobu no biako yɛ nea wobu wɔ beae a anka ɛsɛ sɛ asomdwoe tra—ofie. Ɛnyɛ den sɛ wobɛte okununom, ɔyerenom, anaa awofo a ‘wobu wɔn abusuafo ntɛn’ didi wɔn atɛm anaasɛ wɔyɛ wɔn ayayade bere nyinaa ho asɛm. Nanso, nsɛmmɔne, nsɛm a wɔka de twiw afoforo yayaayaw, ne ateetee nni afã biara wɔ Onyankopɔn asomfo mu. (Efesofo 4:29, 31; 5:33; 6:4) Ɛsɛ sɛ Yesu afotu a ese ‘yennyae ntɛn a yegu so rebu afoforo’ na ‘yennyae fɔ a yegu so rebu afoforo’ no kɔ so yɛ adwuma bere a yɛwɔ fie. Kae sɛ afoforo a yɛne wɔn bedi sɛnea Yehowa ne yɛn di no ka atɛntrenee a yebu ho. Na yɛn Nyankopɔn ne yɛn nni no katee anaa atirimɔden so da. Mmom no, ‘n’ayamye dɔɔso’ ma wɔn a wɔdɔ no. (Yakobo 5:11) Nhwɛso a ɛyɛ anigye a ɛsɛ sɛ yesuasua bɛn ara ni!
Mpanyimfo a ‘Wɔsom Atɛntrenee Mu’
16, 17. (a) Dɛn na Yehowa hwehwɛ fi mpanyimfo no hɔ? (b) Sɛ ɔbɔnefo bi anna nokware ahonu adi a, dɛn na ɛsɛ sɛ wɔyɛ, na dɛn ntia?
16 Yɛn nyinaa wɔ asɛyɛde sɛ yɛda atɛntrenee adi, nanso mpanyimfo a wɔwɔ Kristofo asafo no mu wɔ asɛyɛde titiriw wɔ eyi mu. Hyɛ sɛnea wɔaka “asafohene,” anaa mpanyimfo ho asɛm wɔ nkɔmhyɛ kwan so wɔ Yesaia kyerɛwtohɔ no mu no nsow: “Hwɛ, trenee so na ɔhene bi bedi hene, na asafohene nso, atemmu so na wobedi asafohene.” (Yesaia 32:1) Yiw, Yehowa hwɛ kwan sɛ mpanyimfo bɛsom atɛntrenee so. Ɔkwan bɛn so na wobetumi ayɛ eyi?
17 Saa honhom fam mmarima a wɔfata yi nim yiye sɛ atɛntrenee, anaa trenee hwehwɛ sɛ wɔma asafo no ho tew. Ɛtɔ mmere bi a wɔhwehwɛ sɛ mpanyimfo bu ntɛn wɔ bɔne a anibere wom ho. Bere a wɔreyɛ saa no, wɔkae sɛ Onyankopɔn atɛntrenee hwehwɛ sɛ sɛ ɛbɛyɛ yiye a, wɔda mmɔborohunu adi. Wɔnam saayɛ so bɔ mmɔden sɛ wɔbɛboa ɔdebɔneyɛfo no ma wanya adwensakra. Nanso, mmɔden a ɛte saa a wɔbɔ sɛ wɔbɛboa nyinaa akyi no, sɛ ɔdebɔneyɛfo no ankyerɛ nokware ahonu a, dɛn na wɔbɛyɛ? Wɔ atɛntrenee a ɛyɛ pɛ mu no, Yehowa Asɛm kyerɛ sɛ wonsi gyinae pintinn: “Munyi ɔbɔnefo no mfi mo mu!” Ɛno kyerɛ yi a wobeyi no afi asafo no mu. (1 Korintofo 5:11-13; 2 Yohane 9-11) Mpanyimfo no werɛ how sɛ wɔbɛyɛ biribi a ɛte saa, nanso wonim sɛ ɛho hia na ama wɔabɔ asafo no abrabɔ ne honhom fam ahotew ho ban. Ɛno mpo no, wɔhwɛ kwan sɛ ɔdebɔneyɛfo no ani bɛba ne ho so da bi na wasan aba asafo no mu.—Luka 15:17, 18.
18. Sɛ mpanyimfo de Bible mu afotu rema afoforo a, dɛn na ɛsɛ sɛ wɔma ɛtra wɔn adwenem?
18 Atɛntrenee mu a wɔsom nso kyerɛ Bible mu afotu a wɔde ma wɔ bere a ɛho hia mu. Nokwarem no, mpanyimfo nhwehwɛ afoforo ho mfomso. Na saa ara nso na ɛnyɛ biribiara ho na wɔde afotu ma bere nyinaa. Nanso, yɔnko gyidini betumi ‘adi mfomso bi ansa na n’ani aba ne ho so.’ Bere a mpanyimfo kae sɛ Onyankopɔn atɛntrenee nyɛ atirimɔden anaa nea enni tema no, ɛbɛka wɔn ma ‘wɔateɛ nea ɔte saa no so wɔ odwo honhom mu.’ (Galatifo 6:1) Enti, mpanyimfo ntwiw obi a wadi mfomso anim anaasɛ wɔrenka nsɛm a ɛyɛ yaw nkyerɛ no. Mmom no, afotu a wofi ɔdɔ mu de ma no hyɛ nea wɔde rema no no nkuran. Mpo sɛ mpanyimfo de animka pɔtee rema—sɛ ebia wɔreda nea afi adeyɛ bi a nyansa nnim mu aba adi tẽẽ—a, wɔma ɛtra wɔn adwenem sɛ ɔyɔnko gyidini a wayɛ bɔne no ka Yehowa nguan ho. * (Luka 15:7) Sɛ ɛda adi pefee sɛ ɔdɔ na ɛkanyan wɔn ma wɔde afotu anaa animka ma a, ɛda adi sɛ ɛbɛma ɔbɔnefo no asakra.
19. Gyinae bɛn na wɔma mpanyimfo sisi, na dɛn so na ɛsɛ sɛ wɔde wɔn gyinaesi ahorow gyina?
19 Wɔtaa ma mpanyimfo sisi gyinae a ɛka wɔn mfɛfo gyidifo. Sɛ nhwɛso no, mpanyimfo hyiam bere ne bere mu susuw ho sɛ ebia anuanom foforo a wɔwɔ asafo no mu fata sɛ wɔkamfo wɔn kyerɛ sɛ mpanyimfo anaa asafo mu asomfo anaa. Mpanyimfo no nim hia a ɛho hia sɛ wɔnhwɛ nnipa anim. Wɔma Onyankopɔn ahwehwɛde a ɛfa paw a wɔpaw afoforo saa ho no kyerɛ wɔn kwan wɔ wɔn gyinaesi mu, wɔmma wɔn nkate nni wɔn so. Enti wosisi gyinae a ‘wɔmpere ho mmu atɛn, na wɔnyɛ biribiara nyiyim so.’—1 Timoteo 5:21.
20, 21. (a) Mpanyimfo bɔ mmɔden sɛ wɔbɛyɛ sɛ dɛn, na dɛn ntia? (b) Dɛn na mpanyimfo betumi ayɛ de aboa “wɔn a wɔn koma atu” no?
20 Mpanyimfo de Onyankopɔn atɛntrenee di dwuma wɔ akwan foforo so nso. Bere a Yesaia ka siei sɛ mpanyimfo bɛsom wɔ ‘atɛntrenee mu’ wiei no, ɔtoaa so sɛ: “Wɔn mu biara bɛyɛ sɛ mframa ano hintabea ne osu ano guankɔbea, sɛ nkyerekyerewa so nsuwansuwa, sɛ asase a akyen so botan kɛse onwini.” (Yesaia 32:2) Ɛnde, mpanyimfo, mommɔ mmɔden mma mo mfɛfo asomfo nnya awerɛkyekye ne abotɔyam.
21 Ɛnnɛ a ɔhaw pii a ɛma abasamtu wɔ hɔ no, nnipa pii na wohia nkuranhyɛ. Mpanyimfo, dɛn na mubetumi ayɛ de aboa “wɔn a wɔn koma atu” no. (1 Tesalonikafo 5:14) Momfa tema ntie wɔn. (Yakobo 1:19) Ebia wobehia obi a wɔwɔ ne mu ahotoso a wɔbɛka wɔn komam asɛm a ɛyɛ “awerɛhow” akyerɛ no. (Mmebusɛm 12:25) Momma wonnya ahotoso sɛ wɔn ho hia, wɔsom bo, na wɔdɔ wɔn—yiw, Yehowa ne wɔn nuanom mmarima ne mmea nso dɔ wɔn. (1 Petro 1:22; 5:6, 7) Afei nso, mubetumi ne saafo no abom abɔ mpae na moakae wɔn wɔ mo mpaebɔ mu. Te a wɔbɛte sɛ ɔpanyin bi rebɔ mpae a efi komam ama wɔn no betumi ama wɔanya awerɛkyekye kɛse. (Yakobo 5:14, 15) Atɛntrenee Nyankopɔn no ani rempa mmɔden a mobɔ sɛ mobɛboa wɔn a wɔabotow no so.
Sɛ mpanyimfo hyɛ wɔn a wɔn abam abu nkuran a, na wɔreda Yehowa atɛntrenee adi
22. Akwan bɛn so na yebetumi asuasua Yehowa atɛntrenee, na dɛn na ebefi mu aba?
22 Nokwarem no, yɛnam Yehowa atɛntrenee a yesuasua no so bɛn no bere nyinaa! Sɛ yekura ne trenee gyinapɛn ahorow mu, ka asɛmpa a egye nkwa no kyerɛ afoforo, na yɛhwehwɛ nneɛma pa a ɛwɔ afoforo ho sen sɛ yɛde yɛn adwene besi wɔn mfomso ahorow so a, na yɛreda Onyankopɔn atɛntrenee adi. Mpanyimfo, sɛ mobɔ asafo no ahotew ho ban, mode Kyerɛwnsɛm mu afotu a ɛhyɛ den ma, na musisi gyinae a animhwɛ nnim, na mohyɛ wɔn a wɔn abam abu nkuran a, na moreda Onyankopɔn atɛntrenee adi. Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ Yehowa koma ani gye bere a ofi soro hwɛ fam na ohu sɛ ne nkurɔfo reyɛ nea wobetumi biara de ‘ada atɛntrenee adi’ wɔ wɔne Onyankopɔn nantew mu no!
^ nky. 13 Nkyerɛase bi ka sɛ “mummmu ntɛn” na “mummmu fɔ.” Nea ɛkyerɛ ne sɛ ‘mummfi ase mmmu ntɛn’ na ‘mummfi ase mmmu fɔ.’ Nanso wɔ mfitiase kasa mu no, Bible akyerɛwfo no de ɔhyɛ kabea (a ɛkyerɛ adeyɛ a ɛrekɔ so mprempren) a ɛwɔ dabi kabea mu na edii dwuma wɔ ha. Enti nneyɛe a wɔkaa ho asɛm no yɛ nea na ɛrekɔ so a na ɛsɛ sɛ wogyae.
^ nky. 18 Bible ka wɔ 2 Timoteo 4:2 sɛ, ɛtɔ mmere bi a ɛsɛ sɛ mpanyimfo “yi ntɛn, ka anim, tu fo.” Hela asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “tu fo” (pa·ra·ka·leʹo) no betumi akyerɛ “hyɛ nkuran.” Hela asɛmfua bi a ɛte sɛ ɛno, pa·raʹkle·tos, betumi akyerɛ asɛnni mu okyigyinafo. Enti, sɛ mpanyimfo de animka a emu yɛ den mpo rema a, ɛsɛ sɛ wɔyɛ wɔn a wohia honhom fam mmoa no aboafo.
Deuteronomium 1:16, 17 Dɛn na na Yehowa hwehwɛ fi Israel atemmufo hɔ, na dɛn na mpanyimfo betumi asua afi eyi mu?
Yeremia 22:13-17 Nneyɛe bɛn na Yehowa de ho kɔkɔbɔ ma, na dɛn na ɛho hia na ama yɛasuasua n’atɛntrenee?
Mateo 7:2-5 Dɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛpɛ ntɛm hwehwɛ yɛn mfɛfo gyidifo ho mfomso?
Yakobo 2:1-9 Yehowa bu animhwɛ dɛn, na ɔkwan bɛn so na yebetumi de afotu yi adi dwuma wɔ yɛne afoforo nsɛnnii mu?
Dɛn na mpanyimfo yɛ de boa anuanom mmarima ne mmea ma wɔn ani gye wɔ Onyankopɔn som mu?